किन बोले देउवाले यस्तो– ‘सम्माननीयज्यू, संविधान संशोधन गराएरै छाड्छौं !’ (भिडियो सहित)
के संविधान संशोधन भारतले दिएको देउवा–कार्यभार हो ? के के भयो दिल्लीमा अरु ?
निर्माण सञ्चार, समाचार टिप्पणी । दिल्लीमा बिहीबार भएको दुई प्रधानमन्त्री स्तरीय वान टु वान भेटवार्ता पछि प्रतिनिधि मण्डलसहितका छलफल भए ।
दुई देशबीचको प्रतिनिधि मण्डलबीच वर्ता सकिएपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना भयो ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे ।
मोदीको यस्तो भनाइ पूरा हुनै नपाई प्रधानमन्त्री देउवा केही हडबडे शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए ।
र, भने, ‘सम्माननीयज्यू यसपटक दुईतिहाई पुर्याउन सकिएन, अर्काेपटक संविधान संशोधन जसरी पनि पारित हुन्छ ।’ यस मामलामा प्रम देउवा चुकेको भन्दै कूटनीतिक वृत्तले भने यसलाई व्यापक हंगामाको विषय बनाएको छ ।
आखिर प्रधानमन्त्री हुनु भन्दा अघिदेखि नै संविधान संशोधनलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र ‘मधेसका समस्या’ समाधान हुने बताउँदै आएका प्रम देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संशोधन भारतका लागि गर्न लागे हाउभाउ किन प्रकट गरेका हुन् ?
यो अनौठो लागिरहेको छ ।
के संविधान संशोधन भारतले तोकिदिएको ‘देउवा विशेष जागिर’ हो ?
एउटा स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि आफूले गरेको प्रतिवद्धता समयमै पूरा गर्न नसकेको भावमा ‘अब छिटै पूरा गर्ने प्रष्टीकरण’ भारतकै लागि दिइरहनु पर्ने बाध्यता किन ?
पत्रकार सम्मेलनमा समकक्षी मोदीले संविधानको कार्यान्वयन कुरा उठाउने बित्तिकै देउवा प्रतिरक्षात्मक देखिनु उचित थिएन ।
तर, उक्त जमघटमा प्रम देउवाले ख्यालै गर्न नसकेको कुरा के देखियो भने, मोदीले संशोधनको प्रंसग उल्लेख नगरी कार्यान्वयनको प्रसंगमात्र उठाएका थिए, देउवा भने हडबडाउँदै हतारमा बोल्न पुगे, ‘दुईतिहाई नपुगेर यसपटक संशोधन हुन सकेन, अर्काे पटक दुई तिहाई पुग्छ, अनि संशोधन गराएरै छाड्छु ।’
देउवाले त्यति बोलिसक्ता समकक्षी मोदीले पहिले दोहोराउने गरेजस्तै संविधानमा समावेशिताबारे केही बोलेनन् । न त देउवाको उक्त प्रष्टीकरणलाई कुनै सम्मान नै प्रकट गरेका थिए ।
प्रम देउवाले भनेका छन्, (जुन यो भिडियोमा समेत स्पष्ट छ) ‘मैले संविधान संशोधन मार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन खोजेको हुँ । तर हाम्रो संसदमा दुई तिहाई बहुमत नपुग्दा संशोधन हुन सकेन ।’
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको भिडियो
हेर्दा लाग्थ्यो, दुवै देशका प्रमहरु एक आपसको समान हैसियतमा पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका हुन् र ? बरु भारतका सामू काम गर्न नसकेको कर्मचारीको हैसियतमा पो प्रम देउवा स्पष्टीकरण दिइरहेको पाइयो ।
जुन नितान्त गलत थियो ।
उनले थप फेरि भनेका छन्, ‘भविष्यमा सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन हुनेमा म आशावादी छु र तपाईलाई विश्वास दिलाउँछु ।’
किन भएनन् बाँध र साँधसम्बन्धी मूर्त छलफल ? देउवाले कि मादीले ढाँटे ?
बाँध र साँध नेपाल भारतका दुई प्रबुद्ध समूहले पटक पटक बसेको वैठकले पनि टुंग्याउन नसकेको स्पष्टै देखिएको छ ।
जुन समूह अघिल्लो ओली सरकारले बलमा मोदी सहितको सहमतिले बनेको थियो । जसले १९५० को सन्धिदेखिका याबत् असमान सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्न भन्ने तहबाट यतिबेलासम्म करिब आधा दर्जन बढी वैठक बसिसकेको छ ।
तर, दुई देशका प्रधानमन्त्री बिचको छलफलमा भने भारतले बनाएका एकतर्फी बाँध, मिचिएको साँधबारे कुनै कुरा नभएको बुझिन्छ ।
बिहीबार अपरान्ह हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय सामूहिक र एकल वार्तावारे ट्वीट गर्दै नेपालमा आएको बाढीपहिरोदेखि नेपालमा आवश्यक लगानीका सन्दर्भमा छलफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् प्रम देउवाले ।
तर, मोदीको ट्वीटमा भारतले नेपालमा एकतर्फी बनाएका बाँध लगायतका संरचनाबारे कुरा भएको भनी केही उल्लेख गरेका छैनन् । यसमा कि देउवा कि त मोदीले पक्कै पनि ढाँटेका छन् ।
र, दुवै पक्षसहितको पत्रकार सम्मेलनमा पनि यसबारे कुनै कुरा उठेन । यसले काँग्रेस नेतृत्वले नेपालका मिचिएका सिमानाबारे भारतसँग किन बोल्दैन ?
स्वर्गीय विपी कोइरालादेखि, गिरिजा प्रसाद र वर्तमान प्रम देउवासम्मको नेपाली काँग्रेसको पूरै इतिहास हेर्दा पनि कुनै पनि नेताले देशका मिचिएका सिमानाबारे २०१५ पछिका दिनमा उठाउने हिम्मत नै नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेहरुसँगको पछिल्लो ‘काउन्टर’ ताका केही बोले पनि विपी समेत यस्ता मुद्दामा मौन रहँदै आएका छन् ।
के–के भयो दिल्ली समझदारीमा थप अरु ?
विस्तारमा हेर्नुहोस् भारतको पाँच दिने भ्रमणमा रहेका प्रम देउवाको दोस्रो दिन महत्त्वपूर्ण भेटघाट भएका छन् ।
सोही क्रममा भूकम्प पीडितका लागि दिने रकम ४ विधामा खर्च हुने गरी मेची पुल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न भन्दै आठ बुँदे समझादारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
देउवालाई मोदीको नेपालीमा स्वागत
दुई पक्षीय छलफलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा समकक्षी मोदीले देउवालाई स्वागत गदै नेपाली भाषामा भने– ‘प्रधानमन्त्री र तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दा मलाई खुसी लागेको छ ।
हाम्रो भेट यतिवेला भइरहेको छ जतिबेला हामी द्विपक्षीय सम्बन्धको ७० वर्षगाँठ मनाइरहेका छौं ।’ साथै, मोदीले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिएका थिए ।
बधाईकै प्रसंगमा प्रम देउवाले अनौठो हाउभाउमा संविधान संशोधन गर्न नसकेकोमा दुखेसो व्यक्त गरेका थिए, जुन कुरा कूटनीतिक वृत्तमा आलोचनाको विषय बनेको छ ।
मोदीको सन्देश संविधान संशोधन गर्नू, सर्वपक्षीय वार्ता पनि जारी राख्नू
एकखाले आदेश नै दिदै मोदीले मधेस केन्द्रित दलहरुको मार्गतर्फ संकेत गदै देउवालाई ‘सबै नागरिकसँगको वार्तालाई जारी राख्न र उनीहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेमा संविधानको सफल कार्यान्वयन सहज हुने’ ‘डिप्लोमेटिक डाइलग’ यतिबेला पनि दोहोराएका छन् ।
प्रत्युत्तरमा देउवाले दक्षिणी भागका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न र संविधानलाई अझ सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधान संशोधनको प्रयास गरेको तर दुई तिहाई पुराउन नसकेर नसकेको बताए ।
भविष्यमा आफ्नो दुई तिहाइ पुग्ने र संविधान संशोधन भएरै छाड्ने आफ्नो ‘जंगी विश्वास’ समेत देउवाबाट हडबडाहटका साथ प्रस्तुत भएको थियो ।
दुवै प्रधानमन्त्रीहरुको छलफल पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयमा टुंगोमा पुग्न नसकेको स्रोतले बतायो । दुवै पक्षबाट सन् २०१७ भित्र डीपीआरको विषयका रहेको विवादहरु समाधान गर्ने प्रतिबद्धता मात्र दोहोरिएर आएका छन् ।
अरुण तेस्रोको जग्गा अधिग्रहण समस्या हल, मोदीलाई निम्तो
अरुण तेस्रो परियोजनाको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी रहेको समस्या समाधान भएको जानकारी देउवाले मोदीलाई गराए । मोदीले धन्यवाद दिए । देउवाले अरुण तेस्रोको उद्धाटन गर्न मोदीलाई नेपालका तर्फबाट निम्तो दिएका छन् ।
थप सय मेगावाट किनियो, सँगै भयो उद्घाटन
लोडसेडिङ खल्तीबाटै झिकेर हटाएझै हौवा पिटाइरहेकै बेला नेपालको प्रधानमन्त्रीले फेरि सय मेवा बिद्युत् भारतबाट किन्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ओली सरकारले पनि यसरी नै सय मेवा किनेर आएपछि थप सोही विद्युत्ले नेपालको लोडसेडिङ कम गरेको थियो ।
प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङ र पूर्व ऊर्जामन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले आफूहरुले लोडसेडिङ घटाएको भनी जादू जस्तै कुरा गरिरहँदा भारतीय एक विज्ञले नेपालमै आउँदा भनेका थिए, ‘विद्युत् दिने भारत लोड सेडिङ हटाएको ढोङ फुक्ने घिसिङ?’ भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका थिए ।
घिसिङले आउने हिउँदमा लोडसेसडिङ हुनसक्ने भन्दै हल्ला पिटाइरहेकै बेला सो लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट थप १०० मेगावाट बिजुली किन्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिसँगै ट्रान्समिसन लाइनको दुवै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न पनि भ्याएका छन् । अहिले नेपालले भारतबाट ३०० मेगावट बिजुली किनिरहेको छ ।
नेपालमा गएको भूकम्पपछि भारतले घोषणा गरेको सहयोग खर्च गर्ने सम्बन्धी मोडालिटी तयार भएसँगै सहमति भएको छ । चार विधामा खर्च गर्न मिल्ने सहमति अनुसार ५० हजार घर बनाइने छन् ।
बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा गर्ने खर्चको बारेमा पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
मोदीको सुरक्षा चासो फेरि पनि प्रकट
पत्रकार भेटघाटमा मोदीले खुला सिमानाका कारण दुवै मुलुकको सुरक्षा चासो एक अर्कासँग जोडिएको बताउँदै दुवै देशका सुरक्षा र रक्षा निकायको सहकार्य हुनु पर्ने उनको जोड थियो ।
भारतप्रति अत्यन्तै उदार जस्तै भएर प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री देउवा जतिबेला समकक्षी मोदी बोली भ्याउनै लाग्थे, हडबडाउँदै जवाफ दिन तम्सिन्थे ।
यस सावलमा पनि त्यस्तै भयो, प्रत्युत्तरमा देउवाले नेपाली भूभागमा कुनै पनि हालतमा भारत विरोधी गतिविधि प्रयोग गर्न दिइने छैन ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बाढी तथा पहिरोको विषय पनि उठेको थियो । मोदीले खोलाको व्यवस्थापनको बारेमा संयन्त्र बनाउने र दीर्घकालीन योजना बनाउने आश्वासन दिए ।
मेची पुल स्तरोन्नति
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा भारतले निर्माण गर्ने मेचीपुल निर्माण सम्बन्धी समझादारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालका उत्पादनहरु भारत निर्यातको लागि सहम वनाउन मापदण्ड व्युरो सम्वन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
देउवाको बोली हावामा गयो, बोलेन भारत
सो पत्रकार भेटघाटमा प्रम देउवाले सार्क, वीवीआइन तथा अन्य क्षेत्रिय सहकार्यको विषय उठाएका थिए । तर यस विषयमा भने भारतीय पक्षले केही पनि बोलेन ।
भारत सार्क सवालमा खासै चासो नदिने मुडमा पुगेको स्पष्टै देखिएको विश्लेषक बताउँछन् ।
हुलाकी रोडमा प्राथमिकता
दुई पक्षीय छलफलमा हुलाकी रोड पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सँगै एकीकृत जाँच प्रणालीलाई भारतले जोड दिएको छ ।
दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले हाइड्रोपावरका परियोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने प्रयत्नलाई थप गति दिने वचन दोहोराएका छन् ।